Ipakethe yomoya eguqulweyo (MAP) -Utien Pack Co ,. Ltd.
Faka igesi yendalo kwiphakheji kunye nemveliso ethile yegesi. Zimbini iindlela zokupakishwa kwemoya eguqukileyo kwi-youtianyuan: ukufakela ukufomatha umoya oguqulweyo kunye nebhokisi esele ikhethiwe.
Ukupakishwa komoya oguqulweyo (MAP)
Ukupakishwa komoya oguqulweyo kuhlala kugcina ubume, umbala kunye nokutsha kweemveliso. Irhasi yendalo ekwiphakheji ithathelwa indawo ngumxube wegesi olungele imveliso, edla ngokwenziwa yicarbon dioxide, nitrogen kunye neoksijini.
Ukupakishwa kwemephu kwi-Thermoforming
Ukutywinwa kwetreyi ye MAP
Ingasetyenziselwa ukupakisha inyama eluhlaza / ephekiweyo, iinkukhu, intlanzi, iziqhamo kunye nemifuno okanye ukutya okuphekiweyo okunje ngesonka, iikeyiki kunye nerayisi ebhokisini. Ingayigcina ngcono incasa yoqobo, umbala kunye nokumila kokutya, kwaye inokufikelela ixesha elide lokulondolozwa. Ingasetyenziselwa ukupakisha ezinye iimveliso zonyango kunye nezobugcisa.
Ukulungiswa kwemeko yomoya okwandisiweyo kunokwandisa ubomi beshelufa yemveliso ngaphandle kokusebenzisa izongezo zokutya. Kwaye banokudlala indima ekhuselayo kwinkqubo yezothutho lwemveliso ukukhusela ukuvela kwemveliso. Kwiimveliso zeshishini, ukupakishwa komoya okusetyenzisiweyo kunokusetyenziselwa ukuthintela ukubola. Kwishishini lezonyango, ukufakelwa komoya okuguqulweyo kunokukhusela iimveliso zonyango ezineemfuno eziphezulu zokupakisha.
Ukupakisha oomatshini izinto zokupakisha
Zombini umatshini wokupakisha wefilmomorming wolula kunye nomatshini opakishwe ngaphambili ebhokisini unokusetyenziselwa ukupakisha imeko yomoya. Umatshini wokupakisha ibhokisi esele yenziwe ngaphambili kufuneka asebenzise ibhokisi yesiphatho esele yenziwe ngaphambili, ngelixa umatshini wokupakisha we-thermoforming kukwenza ezinye iinkqubo ezinje ngokugcwalisa, ukutywina njalo njalo emva kokuba wolule ifilimu esongiweyo kwi-intanethi. Ubume bemveliso egqityiweyo emva kokupakishwa kwemeko yomoya ikakhulu ibhokisi okanye ibhegi.
Umatshini wokupakisha we-Thermoforming ungenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi, ezinje ngokubonelela nge-stiffener, ukuprinta ilogo, umngxunya wokuloba kunye nolunye uyilo lwesakhiwo esisebenzayo, ukomeleza uzinzo lokupakisha kunye nokwazisa uphawu.